TickTick: To Do List with Reminder, Day Planner 5.2.2 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 5.2.2 လြန္ခဲ့ေသာ2ရက္က
Application မ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း TickTick: To Do List with Reminder, Day Planner
TickTick: To Do List with Reminder, Day Planner ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
TickTick ✔သင်အချိန်ဇယားကိုအောင်ကူညီပေးသည်ထားတဲ့ရိုးရှင်းပြီးထိရောက်သောမှ-do list ကို task manager ကို App ဖြစ်ပါတယ်, အချိန်ကိုစီမံခန့်ခွဲ, သတ်မှတ်ရက်နှင့် ပတ်သက်. သတိပေးနှငျ့အလုပျမှာဘဝစုစည်းပြီး, အိမ်နှင့်နေရာတိုင်းelse.🗓🔔
TickTick သင်သည်သင်၏တစ်နေ့တာအရှိဆုံးအောင်ကူညီဖို့ဒီနေရာမှာသည်နှင့်အမှုအရာ (gtd) ပြုမိရ။ သငျသညျ, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်, ပြီးမြောက်သို့မဟုတ်အခြားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူပူးပေါင်းပါစေ, တောင် (ကစာရင်းထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးအကူအညီနှင့်အတူ) တစ်ဦးစျေးဝယ်စာရင်းကိုဖန်တီးရန်တစ်ဦးအလုပ်ဖမ်းယူချင်အယူအဆတခုရှိပါတယ်ရှိမရှိ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုစီမံနှင့်သင်၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အောင်မြင်ရန်။
TickTick ယင်း၏အလိုလိုသိဒီဇိုင်းနှင့်စိတ်ကြိုက် features တွေနှင့်အတူစတင်ရန်ရန်လွယ်ကူသည်။ မျှသာစက္ကန့်အတွင်းတာဝန်များကိုနှင့်သတိပေးချက်များ Add ပြီးတော့အရေးကြီးသောအလုပ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပါကအခြားအအဖွဲ့အစည်းနှင့်အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှု apps များထက် သာ. ကောင်း၏။
သင့်ရဲ့ device များအနှံ့ Sync ကို
အသံထည့်သွင်းသို့မဟုတ်စာရိုက်ခြင်းဖြင့်သူတို့ကိုထည့်ပါ။ စမတ်နေ့စွဲဆန်းစစ်မှုနှင့်အတူ, သငျသညျသစ်ကိုလယ်သို့ဝင်ရက်စွဲအချက်အလက်အလိုအလြောကျနှိုးဆော်သံနှင့်အတူတာဝန်သတိပေးချက်အတွက်ကြောင့်နေ့စွဲအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါလိမ့်မည်။ ဤအချိန်မန်နေဂျာနှင့်အတူသင်သည်တတ်နိုင်သကဲ့သို့အကျိုးဖြစ်ထွန်းနေဖို့နှင့်စစ်ဆေးရမည့်စာရင်းလုပ်ဖို့!
လက်ငင်း task list ကိုသတိပေးချက် လုပ်ဖို့
စိတျထဲမှာခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုစောင့်ရှောက်ရန်မလိုပါပဲ! ရုံ TickTick စေနှင့်သင်တို့အဘို့အရာခပ်သိမ်းကိုသတိရနှင့် gtd မှသင်တို့အဘို့, စာရင်းသတိပေးချက်လုပ်ဖို့လက်ငင်းတာဝန်ပေးလိမ့်မယ်။ မည်သည့်နောက်ဆုံးနေ့လက်လွတ်ဘယ်တော့မှရန်အရေးကြီးပါသည်တာဝန်များကိုနှင့်မှတ်စုအဘို့အမျိုးစုံအသိပေးချက်များကို Set!
To-ပြုပါပြက္ခဒိန်အတွက်ရှေ့ဆက်သင်၏အကြံအစည်ရက်သတ္တပတ်သို့မဟုတ်လကြာရှင်းရှင်းလင်းလင်းခြုံငုံသုံးသပ်ချက် Get - နေ့အစီအစဉျအခမဲ့ဖြစ်သည်။ ပိုပြီးတိတိကျကျဖြစ်နဲ့အတိအကျအချိန်ကဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာသိလိုပါသလား? စစျဆေးနှင့်အသင့် timeline သည်နှင့်အညီတစ်ဦးအချိန်ဇယားကိုဖြစ်စေလျက်, အချိန်မန်နေဂျာသုံးစွဲဖို့ 3-Day ကိုကြည့်ရန်ကြိုးစားပါ။ third-party ပြက္ခဒိန်များမှာလည်းထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကို Google ကပြက္ခဒိန်, Outlook နဲ့သကဲ့သို့, ပေါင်းစည်းနိုင်ပါတယ်
နေရာလေးကို Widget လေး
သင့်ရဲ့ home screen ကတစ်စစ်ဆေးရမည့်စာရင်းဝစ်ဂျက်ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်သင့်အလုပ်များကိုနှင့်မှတ်စုရန်လွယ်ကူ access ကိုရယူလိုက်ပါ။ အမျိုးမျိုးသောအရွယ်အစားနှင့်အဝစ်ဂျက်၏မျိုးရှိပါတယ်။ သငျသညျအမြားဆုံးကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်းတဦးတည်းကိုရွေးချယ်ပါ။
မှန်မှန်ပြုမိဖို့လိုသောသူတို့အဘို့အထပ်လုပ်ဖို့တာဝန်များကိုသတ်မှတ်မည်။ တစ်ဦး (ဥပမာနေ့စဉ်, အပတ်စဉ်, ရက်, ဒါမှမဟုတ်လစဉ် anydo) ပြန်လုပ်ကာလကိုရွေးချယ်ပါ။ သငျသညျကဲ့သို့ထပ်စိတ်ကြိုက်နိုင်သည်အွန်လိုင်းသင်တန်းကိုတိုင်း2ပတ်တနင်္လာနေ့ကနေကြာသပတေးနေ့, စီမံကိန်းအတွက်အစည်းအဝေးပထမဦးဆုံးတနင်္လာနေ့တိုင်း2လ။
- အားလုံးစည်းရုံးကြောင့်သိမ်းဆည်းထားပါနှင့် todo list ထဲမှာဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာသိ
- စာရင်းထုတ်လုပ်သူဖိုလ်ဒါနှင့် tags များနှင့်အတူသင့်အလုပ်များကိုနှင့် todo ခွဲခြား။
- ရက်စွဲ, ဦးစားပေးများနှင့်ခေါင်းစဉ်များကရည်မှန်းချက်များ Sort ။
- ဓါတ်ပုံများ, မှတ်တမ်းများနှင့်အခြား attachment များကိုပူးတွဲ။
- လျင်မြန်စွာသုတ်ပြင်ဆင်ရန်ရန်, တာရှည်စာနယ်ဇင်းတည်းဖြတ်ရန်တာဝန်ပွတ်ဆွဲပါ။
ဝေမျှမယ်စာရင်းများ (Todoist), လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များ, မိတ်ဆွေများသို့မဟုတ်မိသားစုနှင့်အတူပူးပေါင်းရည်မှန်းချက်များ assign ။ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပေါ်တွင်သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ကပေါ်, အစည်းအဝေးများအတွက်လျော့နည်းနာရီဖြုန်းနေကြတယ်။ ပူးပေါင်း app ထဲတွင်ထိရောက်မှုတိုးတက်စေပါ။
- TickTick Pro ကိုနှင့်သင်၏အသက်တာကို Organize
- ဇယားကွက်ပုံစံ (အခြားအချိန်စီမံခန့်ခွဲမှု apps များအတွက်ထက် သာ. ကောင်း၏) တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပြက္ခဒိန်ကြည့်ရှုပါ။
- todo list ထဲမှာ Unlimited စီမံကိန်း။
- 299 စာရင်းများ (Todoist), စာရင်းနှုန်း 999 တာဝန်များကိုနှင့်တာဝန်နှုန်း 199 subtasks နှင့်အတူတာဝန်ခံကိုယူပါ။
- subtasks နှင့်အတူအသီးအသီးအလုပ်တစ်ခုကို5အကြောင်းကြားစာများအထိထည့်ပါ။
- အထိ 19 အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူတစ်ဦး task list ကိုစီမံမျှဝေပါ။
- ထိုစစ်ဆေးရမည့်စာရင်းဝစ်ဂျက်ကို format ကိုသုံးပါနှင့်အတူတူပင်တာဝန်များတွင်ဖော်ပြချက်ရိုက်ထည့်ပါ။
- TickTick အတွက် Third-party ပြက္ခဒိန်များနှင့်နေ့ရက်ကိုစီစဉ်ရန်စာရင်းပေးသွင်းပါ။
www.ticktick.com: မှာ TickTick အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ
Facebook မှာ: https://www.facebook.com/TickTickApp
TickTick: To Do List with Reminder, Day Planner အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
TickTick: To Do List with Reminder, Day Planner အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
TickTick: To Do List with Reminder, Day Planner အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
TickTick: To Do List with Reminder, Day Planner အား အခ်က္ျပပါ
hot105 စတိုး 5.71k 1.47M
TickTick: To Do List with Reminder, Day Planner ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း TickTick: To Do List with Reminder, Day Planner အခ်က္အလက္
ထုတ်လုပ်သူ Appest Inc.
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://ticktick.com/about/privacy
လက်မှတ် SHA1: 67:11:DE:26:04:B4:8F:C7:36:CB:B9:E2:9B:8E:B8:34:65:16:05:B3
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Jun Yuan
အဖွဲ့အစည်း (O): Dayup.org
TickTick: To Do List with Reminder, Day Planner APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ